01/09/11 ~ ဝင်းကမ္ဘာကျော်
Friday, September 30, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
ဒီယိုတွေကိုဖြတ်တောက်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ် လေးပါ
တကယ်ကိုကောင်းမွန်လှတဲ့ Software လေးပါ..ဒီ software လေးက ကျွန်တော်ရဲ့ ၂ နှစ်လောက်ရှိပြီး.ဘယ်လိုမှ recovery လုပ်လို့မရတဲ့ file တွေကို recovery လိုက်ပေးပါတယ်.
၁) Format လုပ်ပြီးသား file တွေကိုလုပ်ပေးတယ်။
၂) Raw ဖြစ်သွားတဲ့ file တွေကိုလဲလုပ်ပေးတယ်..ဒီဟာက ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့.. format လုပ်ပြီးသား ကို recovery လုပ်တဲ့အခါမှာ.သူကမေးပါတယ်.နောက်
ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့ file system ကဘာလဲဆိုပြီးမေးတဲ့အခု..ကိုယ်က NTFS ကိုပေးရင်လဲမဟုတ်ဘူး၊FAT လဲ.မဟုတ်ဘူး၊FAT32 မဟုတ်ဘူး.ဆိုပြီး...ဖြစ်တက်ပါတယ်.ဒါက Raw file system ဆိုပြီး..ဘာမှကိုလုပ်လို့မရတော့တဲ့ usb,hardisk တွေကိုလဲ recovery လုပ်ပေးတဲ့အပြင်
၃) Delete လုပ်လိုက်မိတဲ့ file တွေကိုလဲ recovery လုပ်ပေးပါတယ်.
၄) Advanced Recovery ဆိုပြီးတော့လဲပါသေးတယ်.
၅) Recovery သက်သက်မဟုတ်ဘဲ.. File Repair ဆိုပြီး
Excel,Access,Zip,Powerpoint,Word စတဲ့ File format တွေအတွက်လဲပါဝင်တယ်.
၆) Disk Diagnostics စတဲ့ Drive Tests,Size Manage,Data Advisor,Partition စတဲ့များပြားအသုံးဝင်လှတဲ့ Software တွေကိုစုစည်းထားတဲ့ Easy Recovery Professional ဖြစ်ပါတယ်..ဒီအပြင် Portable ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်.လို့မျှော်လင့်ပါတယ်..
မူရင်း။ ။ စံပီး
အခုတစ်ခေါက်ကျနော်တင်ပေးမှာကတော့ အခုအချိန်မှာ Online ကနေနားထောင်လို့ ရတဲ့ Online Radio တွေအများအပြားရှိနေပါပြီ။ အဲလိုနားထောင်လို့ ရတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံ အနေ နဲ့ ကွန်နက်ရှင် နှေးနေသေးတာကြောင့် Radio တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကို ပြောင်းရင် Browser ကနေပြောင်းရင်တော်တော်ကြာပါတယ်။ အဲလို မျိုးတွေစောင့်စရာမလိုအောင်ကျနော် Software လေးတစ်ခု ရေးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Software လေးကိုအရင်ဆုံး ရေးခဲ့တဲ့လူကတော့ MMiTD က Who Am I? ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူရေးပြီးမှကျနော်ကထပ်ပြီး Radio အစီအစဉ် တွေထပ်တိုး ချဲ့ ထားပြီးတော့ မရတဲ့လိုင်းတွေ မထည့်တော့ပဲနဲ့ Software ရဲ့ GUI ကိုပါပြောင်းပြီးပြန်ရေးထားတာလေးပါ။ Online Radio ကို ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ Admin တွေကိုလဲဒီနေရာက နေခွင့်တောင်း လိုက်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးထည့်ထား တာကိုမကြိုက်ဖူးဆိုရင်လဲ ပြန်ဖြုတ်ပေးပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ အခုတော့ အောက်မှာပုံလေးတင်ပေးထား ပါတယ်။ လိုချင်ရင် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာလင့်ပေးထားပါတယ်ဒေါင်းပြီးရင်အထဲမှာပါတဲ့ File တွေ တစ်ခုမှမပျက်ပါစေနဲ့ File တစ်ခုပျက်သွားတာ နဲ့ အလုပ်မ လုပ်တော့လို့ ပါ။ နောက်တစ်ခုက သူ့ ကို run ဖို့ စက်ထဲမှာ Net Frame အနိမ့်ဆုံး version 2.0 ရှိရပါမယ်။ မရှီသေးတဲ့လူများအောက်နေဒေါင်း လိုက်ပါ။
Download Online Radio Collection >>
Download Microsoft Net Frame Below
မူရင်း။ ။ ကြေးစားလေး
ဒါကတော့ ကိုယ် IP အစစ်ကိုသူများမသိစေချင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါ.
ကျနော်အခုတင်ပေးမှာကတော့ ကိုယ့်စက်ရဲ့ IP ကိုတစ်ခြားသူမသိစေဖို့ ပါ..။ ဥပမာ ကျနော်တို့ က သိပ်စိတ်မ ချရတဲ့ဆိုဒ်ကိုသွားမယ်ဆိုပါစို့ အဲ့ဒီအခါကျရင် ဒါလေးသုံးထားရင် သူတို့ က ကိုယ့် IP ကိုအလွယ်တကူ ရှာလို့မရတော့အောင် IP ကို Change ထားပေးပါတယ်..။ အကျိုးရှိမယ့်နေရာတွေမှာသာသုံးပါ... တစ်ဖက်သားကို ဒုက္ခ ရောက်မယ့်နေရာတွေမှာမသုံးပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါတယ်..။ လိုချင်ရင်အောက်မှာ link တွေပေးထားပါတယ်..။ အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေဒေါင်းလိုက်ပါ..။
Download Mediafire | Download zshare | Download ziddu | Download Megaupload | Download Easyshare | Download fileserve | Download deposit | Download filesonic | Download wupload | Download Hotfile | Download Ifile
Friday, September 30, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်2comments
ကျွန်တော် အိမ်မှာ တခါတလေ ပျင်းရင် ကွန်ပျူတာမှာ iDance D Player ဆိုတဲ့ ပလေယာလေးနဲ့ သီချင်းဖွင့်လေ့ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ပလေယာလေးက ကိုရီးယားက လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ သူက ကာတွန်း (manga) 3D လေးတွေကတာပါ ပါတယ်။ ပလေယာနဲ့ ဖွင့်လို့ရသလို အဲဒီ ကာတွန်း လေးတွေကို desktop ပေါ်မှာ ဖွင့်ပြီး တင်ထားလို့လဲ ရပါတယ်။ ကာတွန်းရုပ်လေးတွေ ကတာ တော်တော်လှပါတယ်.. နောက် သီချင်းတွေနဲ့လဲ လိုက်တယ်။
သီချင်းက ကိုရီးယား သီချင်းတွေ နာမည်ကြီး သီချင်း အများစုပါပြီးတော့.. ကိုယ့်ဖာသာ စိတ်ကြိုက် mp3 သီချင်းတွေလဲ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် သီချင်းဖွင့်ရင်တော့ ကကွက်တွေနဲ့ နဲနဲမလိုက် သလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာ သီချင်း ဆိုင်းကြိုက်တဲ့ မောင် လိုသီချင်းမျိုးနဲ့ တွဲဖွင့် ပါတယ်။ ပလေယာလေး သွင်းလိုက်တာနဲ့ သီချင်းအများကြီး တစ်ပါတဲပါပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကျွန်တော်ကြိုက်တာက Change, Carrot ဆိုတဲ့ သီချင်း ၂ ပုဒ်တော့ ကြိုက်တယ်။
Change က စစချင်း ရဲကားသံလို မီးသတ်ကားသံလို အသံနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ ringtone လုပ်ပြီး သုံးထားတယ် ဖုန်းလာတိုင်း အခန်းထဲက လူတွေ အပြင်ထွက်ပြီး လမ်းပေါ်မှာ မီးသတ်ကား ထွက်ကြည့်တာက ခဏခဏ ပဲ =P. Carrot သီချင်းကတော့ ကိုရီးယားကားထဲမှာ မင်းသမီးတွေ ဆိုတာ ခဏခဏတွေ့တယ်။ ပလေယာလေးကို download လုပ်ပြီး စမ်းကြည့်လိုက်ပါဦး အပျင်းပြေတယ်.. စိတ်ပါရင် လိုက်ကလို့လဲ ရတယ် ပျော်ရွှင်ပါစေ။ ။
မူရင်း။ ။ ထူးတေဇာ comments
Music MP3 Downloader 5.2.2.8 Portable (Latest Version)
Thursday, September 29, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
MP3 သီချင်းများကို Full And Free ရှာဖွေ Download လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Music MP3 Downloader 5.4.6.6 (Latest Version) ဖြစ်ပါတယ်။ Search Box မှာ ရှာဖွေလိုသည့် Artist, Title, Album, Edition စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းခါ လွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ သီချင်းများရော၊ မြန်မာ သီချင်းများကိုပါ ရှာဖွေနိုင်ပြီး၊ လတ်တလော Hot ဖြစ်နေသည့် သီချင်းများကို သီးသန့်ဖေါ်ပြပေးပါတယ်။ POP, Rock, Blue, Classic စသည်ဖြင့်လည်း Categories အလိုက်ရှာဖွေပေးနိုင်ပါတယ်။ နားဆင်လိုသည့် သီချင်းပေါ်တွင် Click နှိပ်ခါ လွယ်ကူစွာနားဆင်နိုင်သည့် အတွက် Downloader အဖြစ်သာမက၊ Online Streaming Player တစ်ခုအဖြစ်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Download လုပ်လိုပါက သီချင်းနာမည်၏ ဘေးတွင်ရှိ Download Link ကို Click နှိပ်ခါ Download လုပ်ပေးရုံပါပဲ....
Portable Modified Version ဖြစ်သည့်အတွက် USB ကဲ့သို့သော Flash Device များမှာ ထည့်သွင်းခါ Install လုပ်စရာမလိုပဲ လွယ်ကူစွာသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်။ Multiple Download လုပ်နိုင်ပြီး၊ Resume Download ပါလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Always On Top Function, Start With Window Function များပါပါဝင်ပါတယ်။
အသုံးပြုပုံအသေးစိတ်ကို ဒီမှာ လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်...။
Download v5.2.2.8 Portable
Download Accelerator Plus (DAP) 9.4.1 Premium (Latest Version)
Thursday, September 29, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်2comments
လတ်တလောနာမည်ရ Download Manager များထဲမှ တစ်မျိုးဖြစ်သည့် SpeedBit မှ ထုတ်လုပ်ထားသော Download Accelerator Plus (DAP) 9.4.1 Premium (Latest) Version ပါ။ Download Manager အပြင် Internet Browser , FTP Browser များပါ Built In ပါဝင်ပါတယ်။ Pause/Resume Function တွင် အခြား Download Manager များထက်ပိုမို ကောင်းမွန်ပြီး၊ သာမန်ထက် ၅ ဆမှ ၁၀ ဆထိအောင် ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ Download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ DAP Internet Browser အနေနဲ့ သာမန် Internet Explorer, FireFox , Opera အစရှိတဲ့ Browser များထက်ပိုမို မြန်ဆန်ချောမွေ့စွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး၊ အခြား Function များစွာပါဝင်ပါတယ်။
Download လုပ်ပြီးလျှင် File ကိုပြန်ဖြည်၍ dap94beta ကို Install လုပ်ပါ။ Install လုပ်ရာတွင် Speedbit Toolbar, Ask Toolbar, Speedbit Video Accelerator, Mail info စသည်တို့ကို Install မလုပ်လိုပါက Uncheck လုပ်ပေးပါ။ Install လုပ်ပြီးလျှင် System Tray ရှိ Download Accelerator Plus Icon ပေါ်တွင် Right Click နှိပ်၍ Exit နှင့် ပြန်ထွက်ပါ။ ပြီးလျှင် Download File ထဲမှ Patch တွင်ပါဝင်သော download.accelerator.plus.patch ကို Run ပါ။ ထို့နောက် Patch ကို နှိပ်လိုက်လျှင် Patch File ထဲတွင် DAP ဟူသော File ရလာပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း DAP File ကို Copy ကူးပါ။ ပြီးလျှင် Desktop ပေါ်ရှိ Download Accelerator Plus ShortCut ပေါ်တွင် Right Click တင်၍ Properties သို့သွားပါ။ ပြီးလျှင် Open File Location ကို နှိပ်ပြီး၊ ကျလာသော Window တွင် Copy ကူးလာသည့် DAP File ကို Paste (Replace) လုပ်လိုက်လျှင် Premium Version ကို အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
SharingMatrix မှ Download လုပ်ရန်
မူရင်း။ ။ STAMEDIA comments
Windows Password ကို command ထဲကနေ သွားပြီး ချိန်းလို့ရပါတယ်။ မူလ Password ကို သိစရာမလိုပါဘူး။
(1) RUN > cmd
(2) net user လို့ ရိုက်ပါ။ Enter ခေါက်ပါ။
(3) မိမိပြောင်းလိုသော account ကို ရွေးချယ်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းရိုက်ပါ။ ဒီမှာတော့ naytoe2ကိုပြောင်းပြထားပါတယ်။
(4) Enter ခေါက်လိုက်ပါ ( * = shift နဲ့8 ကို ရိုက်ထားတာပါ)
(5) Typeapassword for the user: နေရာမှာ ကိုယ်ပေးချင်တဲ့ password ကိုပေးပါ။
Retype the password to comfim: နေရာမှာ Typeapassword for the user က password ကို ပြန်ရိုက်ပါ။
(6)Enter ခေါက်ပါ။ The command completed successfully ဆိုသော စာသားပေါ်လာလျှင် ရပါပြီ။
Thursday, September 29, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်3comments
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြုစုထားတဲ့ အဘိဓာန်ပါ....ရပြီ ဆိုရင် run လိုက်ရုံပါပဲ...။ ဒါပေမဲ့ သူက ဖောင့်အနေနဲ့ ( ၃ )မျိုးကိုလက်ခံပြီး အလုပ်လုပ်တယ်ခင်ဗျ..။
ဒီတော့ ညာဘက်အပေါ်က Box ကိုနှိပ်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တာ ပြောင်းလို့
ရတယ်ခင်ဗျ..။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ဖောင့်ကို ရွေးပြီး သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်က ဘောင်လေးမှာ ကိုယ်ကြိုက်ရာ စာလုံးကို ရိုက်ပြီး ရှာလိုက်တာနဲ့ သူက အောက်မှာ ဘာကို ရှာမှာလဲ ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ထားတာရဲ့ သက်ဆိုင်တာတွေကို ပြထားပါတယ်ခင်ဗျ...။
အဲဒီမှာကိုယ်ကြိုက်တာကို ရွေးလိုက်ရုံပါပဲ..။ကိုယ့်ဖာသာ အပြည့်အစုံ ရိုက်ရင်လည်း ရိုက်ရင်လည်းရပါတယ်...။မြန်မာလို ပြောင်းပြီးရှာချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဇော်ဂျီဖောင့် အတိုင်းပါပဲ..။ Ctrl + Shit ပေါ့ဗျာ..။
ERROR တွေများနေတဲ့ သင့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ ကို ဒီကောင်လေးနဲ့ FIGHT ကြည့်လိုက်ပါ အထဲမှာ Crack ဖိုင်ပါ ပါတယ် ကံကောင်းကြပါစေဗျာ.......
Thursday, September 29, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
dictionary and language translation software ပါ။ခရက်ဖိုင်ပါ။ပါပါတယ်
မူရင်း။ ။ ကိုမြတ် comments
Wondershare iTunBack 1.0.0.8 | 19.3 MB
iPhone, iPad or iPod တို့ နဲ့ ကွန်ပျူတာကိုချိတ်ပေးတဲ့ဆော့လ်ဝဲလ်လေးပါ။
Copy files from your iPod to iTunes without deleting the contents on your iPod.Wondershare iTunBack is the easiest transfer tool to copy contents from iPhone, iPad or iPod to iTunes. It can copy music, movies, playlists, tv shows, podcasts, ringtones, voice memos, books, audiobooks to your iTunes library, without deleting the original contents on your Apple device.
မူရင်း။ ။ ကိုမြတ်
ကျွန်တော် ဒီတစ်ခါ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ မိမိတို့ ဖြုတ်လိုတဲ့ Softwares လေးတွေကို အမြန်ဆုံးနဲ့ အပြည့်ဝဆုံး
ဖြုတ်လို့ရအောင်နဲ့ နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Update လေးကိုတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က
လည်း 3.12 MB ပဲရှိပါတယ်။ သူ့အတွက် Serial key လေးပါထည့်ပေး ထားပါတယ်။ အသုံးပြုကြည့်
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေသာယူသွား
မူရင်း ။ ။ နေမင်းမောင် comments
ဒီကောင်လေးကတော့ ကျွန်တော့်ကိုလည်းအစ်ကိုတွေတောင်းထားတာ နည်းနည်းကြာသွားပါတယ်။ သည်းခံ ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း Full Version လေးရအောင်လုပ်နေလို့ပါ။ အခုတော့ အဆင်ပြေပါပြီ။ ကျွန် တော်တို့ Internet Speed နဲ့ Web Browsers တွေကို ဖွင့်ရတဲ့ Speed လေးတွေမြန်ဆန်လာအောင် ဒီကောင် လေးက အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်တို့ Beta Version လေးဖြစ်တဲ့ အတွက် ကီးထည့် ပေးစရာမလိုပါဘူး။ နောက်ကိုလည်း ကျွန်တော် Connection မြန်အောင် အထောက် အကူပြုပေး နိုင်တဲ့ Software လေးတွေရလာတာနဲ့ တင်တင်ပေးသွားပါ့မယ်။အသေးစိတ်သိလိုရင် တော့ သူ့ရဲ့ Home Page လေးမှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
Windows ကိုသာအဓိက အသုံးပြုနေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေအတွက် Windows Doctor ကလည်း ဆောင်ထား သင့်တဲ့ Tool တစ်ခုပါ.. ဒီကောင်လေးက ကျွန်တော်တို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Windows မှာဖြစ်တက်တဲ့ Error တွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ဖို့ အတွက်သီးသန့် ထုတ်ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒီကောင်းမှာ System Booster , System Security , Registry Cleaner , Privacy Cleaner နဲ့ Advance Tool ဆိုပြီး ပါဝင်ပါတယ်.. အပိုင်းတစ်ပိုင်းချင်း Scan ဖတ်ပြီး Error တွေကိုရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.. ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို Full Version လေးသုံးလို့ရအောင် Patch File လေးပါထည့်ပေး ထားပါတယ်.. My Computer >> Local Disk ( C: ) >> Program File အထိအဆင့်ဆင့်သွားပြီး Windows Doctor ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးထဲမှာ Patch File လေးကိုထည့်ပေးပြီး Double Click ပေးလိုက်ပါ.. ပြီးရင် Patch ကိုနှိပ်လိုက်ယုံပါပဲ..မိမိတို့ Windows မှာလိုအပ်လို့ ဆောင်ထားချင်တယ် ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ အဆင်ပြေတဲ့ လင့်ကနေသာ ဒေါင်းလော့ ချသွားလိုက်ပါ..
Wednesday, September 28, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော်2comments
ကွန်ပြူတာ Screen ကို လိုသလို ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ Softwre လေးပါ......
portable software လေးပါ။ screen shot ကို လိုအပ်သလို ဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်။ 1.0 M ပဲရှိပါတယ်။ စမ်းသပ်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ယူပါ။
English-Myanmar Dictionary (Version 1.0) released.
Wednesday, September 28, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် 1 comment
Pictures (Optional) :
File Size: 53,470 KB
Voices (Optional)File Size: 27,571 KB
1.Easy to use (Search the word when you typing)
2.voices supported(Computer's voice and human's voice)
4.You can add/edit or remove words.
Tested on Windows XP Professional SP2 and Windows 2000 Professional SP4 onatablet PC.
This program use modified version of tab delimited database file (entab.tsv) from http://ornagai.com
Many efforts have been made for this program to be sure it works fine.
No one is perfect, if you found some bugs(problems), please report me any bugs you encountered with full details.
If it is Database related problem, you can even add/edit database file your self.
(You can see database "entab.tsv" file in the program folder).
If you foundaword "applf" instead of "apple".Just open database file inatext editor and edit it.
If you can't findaword/new word "Aung San".Just open database file inatext editor and add it.
(When makinganew line, Press SHIFT+ENTER Key instead of ENTER Key)
Since database is justaplain text file, any one can edit contents of the file.
Each word is separated byaTAB. Just make sure you save the edited file with UTF-8 encoding.
Pictures are located in "Picture" folder. You can add/remove pictures your self.
Human Voice files are .mp3 files and located in "Voice" folder. You can add/remove voice files your self.
There is no HELP file available at the moment. This program is very simple to use and i don't think it is necessary.
But every program should haveaHelp or Using Manual file.
If someone can writeahelp file for this program in Burmese or English.
I will include help file in future releases. You can write text in MS Word and I will convert to help file ".hlp" or ".chm".
To be honest, I can't make all words, pictures and sound files my self and test all words,pictures,sounds files are correct.
REMEMBER, only your bugs reporting and help will make this program better.
I made this program in my free time. Hope it useful!
Wednesday, September 28, 2011 ဝင်း ကမ္ဘာကျော် No comments
၁ ။ ဒီဟာကတော့ Rapidshare, Megaupload, zShare, Mediafire, and more.. စတဲ့ ဒေါင်းလုဒ်ဆုဒ်တွေကနေ စောင့်စရာမလိုပဲ ဒေါင်းပေးနိုင်တဲ့ add ons လေးပါ။
၂ ။ Proxy မသုံးပဲ ပိတ်ထားတဲ့ဆိုဒ်တွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆို၇င်တော့ အောက်မှပေးထားတဲ့ add ons လေးကို
၃။ ဒီဟာကတော့ ကိုယ်ဝင်မဲ့ဆိုဒ်က အန္တရာယ်၇ှိမရှိ ပြပေးတဲ့ ဟာလေးပါ။
စိမ်း ၊ ဝါ ၊ နီ နဲ့ပြပေးပါတယ်။ ဒီမှာ ဖတ်ပါ..
၄ ။ ဒီဟာကတော့ Youtube Vedio တွေကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ဘို့ပါ။
၅ ။ ဒါကတော့ downthemall addon လေးပါ
ရှိသမျှကို အကုန်ဒေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်.... IDM နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်တူပါတယ်
download speed ကတော့ထူးမခြားနာပါ..ဒါပေမဲ့
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်ကလင့်က ယူလိုက်ပါ